Migadra Noho ny Finoany Ireo Vavolombelon’i Jehovah any Érythrée
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Haoussa Hiligaynon Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Vietnamianina Xhosa Éwé
Samborina sy gadraina ny Vavolombelon’i Jehovah sy ny olon-kafa any Érythrée, nefa tsy mandalo fitsarana akory izy ireo sady tsy misy fiampangana ara-dalàna. Misy lehilahy sy vehivavy ireo Vavolombelona voafonja, ary misy ankizy sy antitra koa. Gadraina izy ireo noho ny asa ara-pivavahana nataony na noho ny antony tsy fantatra. Ampidirina am-ponja koa ny tovolahy tsy mety manao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany.
Tsy nanana fahalalahana intsony ny Vavolombelon’i Jehovah rehefa nahazo fahaleovan-tena i Érythrée, tamin’ny 1993. Tamin’ny 25 Oktobra 1994, dia namoaka Didim-pitondrana ny Filoha Afewerki hoe esorina amin’ny Vavolombelon’i Jehovah ny zom-pirenen’izy ireo. Tsy nifidy mantsy izy ireo rehefa nisy fitsapan-kevi-bahoaka natao tamin’ny 1993 mba hitakiana ny fahaleovan-tena. Tsy nety nanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany koa izy ireo. Nanomboka teo, dia nanagadra sy nampijaly ary nanenjika ny Vavolombelon’i Jehovah ny mpitandro filaminana any Érythrée, mba hanerena azy ireo hiala amin’ny finoany.
Migadra mandritra ny fotoana tsy voafaritra sady mijaly be
Nogadraina nanomboka tamin’ny 24 Septambra 1994 i Paulos Eyasu sy Isaac Mogos ary Negede Teklemariam, satria tsy nety nanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany. Nisy lehilahy folo koa efa nigadra nandritra ny folo taona mahery.
Natao tao anaty kaontenera vy ny Vavolombelona voafonja sasany. Ny hafa kosa natao tao anaty trano vato na fanitso, ary any ambanin’ny tany ny antsasak’ilay trano. Maty tamin’ny Jolay 2011 ny voafonja iray 62 taona atao hoe Misghina Gebretinsae. Nafana loatra mantsy tao amin’ilay toerana fanasaziana “ambanin’ny tany” nisy azy, tany amin’ny Fonjan’i Mitire. Mitovy amin’izany koa ny nitranga tamin’i Yohannes Haile, 68 taona. Maty izy tamin’ny 16 Aogositra 2012, rehefa avy nigadra efa-taona teo ho eo tao amin’io toerana io.
Nafindra tany amin’ny Fonjan’i Mai Serwa ny Vavolombelon’i Jehovah rehetra tao amin’ny Fonjan’i Mitire, tamin’ny Jolay 2017. Any ivelan’i Asmara io fonja io ary azoazo kokoa ny fiainana ao.
Fisamborana sy famotsorana tato ho ato
Voaheloka higadra enim-bola i Saron Gebru nanomboka tamin’ny 5 Aprily 2016, satria nanatrika ny Fahatsiarovana ny nahafatesan’i Kristy, tamin’ny 2014. Nafahana izy tamin’ny 5 Oktobra 2016.
Nafahana i Asfaha Haile tamin’ny Aprily 2016.
Nogadraina ny vehivavy antsoina hoe Samuol Dawit, tamin’ny 9 Aprily 2016, satria tsy nety nanao miaramila noho ny feon’ny fieritreretany.
Saika handoa onitra i Hadas Dawit, tamin’ny 30 Martsa 2017, mba hanafahana an’i Samuol rahavaviny, nefa nosamborina koa ka samy migadra ao amin’ny Fonjan’i Mai Serwa izy mirahavavy izao.
Nafahana avy tao am-ponja i Nehemiah Hagos, tamin’ny 26 Aprily 2017.
Tovolahy Vavolombelona roa no nosamborina, tamin’ny Septambra 2017, ary voahazona ao amin’ny paositry ny polisy any Asmara izy ireo izao.
Sokafy ity rohy eto ambany ity raha tianao ho hita ny lisitr’ireo Vavolombelon’i Jehovah migadra any Érythrée:
Gadraina Noho ny Finoany: Érythrée (PDF amin’ny teny anglisy)
Vavolombelona 53 no migadra.
Maro tamin’ireo nosamborina tamin’ny 14 Aprily no nafahana. Mbola any am-ponja anefa ny 20 tamin’ireo voasambotra tamin’ny 27 Aprily, ka Vavolombelona 73, raha atambatra, no migadra.
27 Aprily 2014
Vavolombelona 31 no voasambotra nandritra ny fianarana Baiboly nataon’izy ireo.
14 Aprily 2014
Vavolombelona 90 mahery no voasambotra nandritra ny fankalazana ny Fahatsiarovana ny nahafatesan’i Kristy.
Vavolombelona 52 no any am-ponja, ary mijaly be izy ireo.
Maty i Yohannes Haile, 68 taona, satria mafy be ny zavatra niainany tany am-ponja.
Maty i Misghina Gebretinsae, 62 taona, satria mafy be ny zavatra niainany tany am-ponja.
28 Jona 2009
Nanao bemidina tany an-tranon’ny Vavolombelona iray ny manam-pahefana nandritra ny fotoam-pivavahana natao tao. Nosamborin’izy ireo daholo ireo Vavolombelona 23 tao, izay teo anelanelan’ny 2 ka hatramin’ny 80 taona. Tafakatra 69 ny isan’ny Vavolombelona any am-ponja.
28 Aprily 2009
Nafindran’ny manam-pahefana any amin’ny fonjan’i Mitire ireo Vavolombelon’i Jehovah rehetra notazonina tao amin’ny paositry ny polisy. Iray ihany no tsy nafindra.
8 Jolay 2008
Nanomboka nanao bemidina tany an-tranon’olona sy tany amin’ny toeram-piasana ny manam-pahefana, ary nisambotra Vavolombelona 24. Mamelona fianakaviana ny ankamaroan’ireo voasambotra.
Nakaton’ny fanjakana ny antokom-pivavahana rehetra tsy anisan’ireo fivavahana efatra ekeny ho ara-dalàna.
25 Oktobra 1994
Nivoaka ny didim-pitondrana hoe esorina amin’ny Vavolombelon’i Jehovah ny zom-pirenen’izy ireo sy ny zo fototra hafa ananany.
24 Septambra 1994
Nogadraina i Paulos Eyasu sy Isaac Mogos ary Negede Teklemariam nefa tsy notsaraina sady tsy nisy zavatra niampangana azy. Mbola any am-ponja izy ireo hatramin’izao.
Nanomboka nisy Vavolombelon’i Jehovah tany Érythrée.